कर्मचारी समायोजनमा कहाँ चुक्यो सरकार ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
By नेपाली कान्छा on 2:38 AM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सरकारले जुन ऐन बनाएको थियो, यसको सकारात्मक पक्ष भनेको कर्मचारीले एकहदसम्म स्वीकारेका थिए । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नयाँ सरकार आयो ।
तत्कालीन आवश्यकता भएकाले देउवा सरकारले समायोजन विधेयक ल्यायो । त्यही विधेयकमा केही सुधार गरेर काम गरेको भए एउटा बाटो हुन्थ्यो । त्यो बेलामा सरकारले रोक्यो । सरकार भएपछि उसले आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण राख्छ । मेरो आफ्नै भिजन छ, शेरबहादुर देउवाले भनेको मान्दिन । ठीक छ, नयाँ सरकारले भन्न पाउँछ । तर, यो निर्णय लिइसकेपछि ६/७ महिना चाहिँ के गरेर बसेको त ?
मेरो विश्लेषण मात्र होइन, सूचना पनि हो । एकजना सेवानिवृत्त हुन लाग्नु भएको सचिवले यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिनुभएको छ । मैले कर्मचारी समायोजन गरेर आएँ, थप जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको लाइन छ । केही वरिष्ठ सहसचिवको आफ्नो हिसाव-किताव छ
अर्को, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र बसेर काम गने हो भने प्रधानमन्त्रीले हाम्रा इस्टिच्युसनहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? आफ्नो सोतअनुसार त्यसमा सुधार कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो । परिणम त आफैं आइहाल्छ । मैले संसदबाट लगातार आग्रह पनि गरेको हो कि तपाईको ध्यान संघीय व्यवस्था र इस्टिच्युसनहरुलाई कसरी सफल बनाउनेभन्नेतिर जानुपर्छ । तर, दुबैमा प्रधानमन्त्रीको रुची देखिएन ।
केही वरिष्ठ सहसचिवको आफ्नो हिसाव-किताव छ । ओएनएम गर्दैगर्दा पनि एउटै मन्त्रालयमा बढीभन्दा बढी वरिष्ठ मान्छेहरु कसरी रहने भन्ने ढंगले थोरै मान्छेको संकीर्ण स्वार्थ हावी भएर भएको छ । त्यसैले मेरो तर्क के भने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भिजन भएको भए कर्मचारीले फलो गर्थे । त्यो नभएपछि उनीहरुले खेले ।
तल नजानेहरुको हकमा केन्द्रमा पुल दरबन्दी बनाउने र एउटा मापदण्ड बनाएर निश्चित समय ४/५ वर्षलाई काजमा तल पठाउने । त्यसले संघमा कति मान्छे बस्छ, प्रत्येक तहमा ग्याप कति छ भन्ने थाहा हुन्छ र अब पदपूर्ति गर्दा जहाँ चाहिएको हो, त्यहीँका लागि भनेर लिन सक्छौं । यो बाटो हिँड्यो भने अहिलेको समस्या पनि समाधान हुन्छ र केही वर्ष पछाडि आफैं मिल्छ । किनभने संघको मान्छे, संघमा रहन्छ, प्रदेशको मान्छे प्रदेशमा नै रहन्छ । अहिले तल गएकालाई ठाउँठाउँमा झ्याल राख्छौं र मापदण्ड पुरा गरेर माथि आउन सकिन्छ ।
तर, सरकार सुल्टो बाटो हिँडेन । यसले दुईवटा समस्या आएको छ । पहिलो, विभेद भयो । कस्तो विभेद भन्दा समान सेवा सर्तमा प्रवेश गर्‍यो । सबै कर्मचारी श्रेणिगत प्रणालीमा प्रवेश गरेका हुन् । तर, अध्यादेशमार्फत श्रेणीमा प्रवेश गरेकालाई एक तह बढुवा दियौं भनेर तहमा पठाउन खोजेका छौं । अब एउटै प्रकृतिको सेवामा आएको मान्छे कोही श्रेाणिमा रहने भए, कोही तहगत हुने भए । त्यसमा पनि तहमा गएका कर्मचारीलाई तलको तल नै रहने बनाइएको छ ।
जो मान्छे भर्खर सेवामा प्रवेश गरेको छ, उसलाई तल -प्रदेश वा स्थानीय तह) को सेवा केही पनि थाहा छैन तर, जाने नभए जा, नजाने भने लट्री निकालेर पठाइदिन्छु भनेपछि जबरजस्ती घोक्राएर पठाइएको मान्छे, जसको वृद्धिविकास रोकिएको छ, उसले बलियो बनाउनुपर्ने प्रदेश र स्थानीयमा गएर जुन मोटिभेसनका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्दैन ।
त्यसैले कस्तो खालको मान्छे दिने ? थोरै मान्छेबाट कसरी धेरै काम लिने ? कसरी पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने ? भनेर काम गर्ने मौका थियो सरकारसामु । यसका लागि सुल्टो बाटो भनेको संघीय निजामती ऐन बनाउने र त्यसपछि अरु ऐन ल्याउने नै हो ।
म स्पष्टसँग भन्छु, यतिबेला कुन तहको कर्मचारी आन्दोलित छैन ? योबेलामा आगोमा ध्यु थपौं भनेर गैरजिम्मेवार हुने हो भने यही कुरालाई लिएर ०४९ मा जस्तो देशभर आगो बाल्न सक्छौं । तर, यो गलत बाटो हुन्छ ।
अध्यादेश लागू भयो भने के हुन्छ ? एक त त्यसै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सन्तोषजनक छैन । एकै पटक देशभर सबै थाकेका मान्छेहरु माथिपट्टी र केही गर्छु भनेर आएका बलपूर्वक तल्लो तहमा पठाउँदा के हुन्छ ? कर्मचारीहरुकै ट्यागलाइन नै छ, घोक्राएको मान्छे झोक्राउँछ । यसले देशभरिकै सेवा प्रभावित हुन्छ र यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ ।
हामी त्यो बेलामा गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले मलजल गर्न जाँदैनौं । संसदीय प्रक्रियाबाट जान्छौं । तर, अहिले सिंहदरबारमा कालो झण्डा राख्न गएकाहरु कांग्रेसले भनेर गएका हुन् ? दुईतिहाईको सरकार भएको बेला हामीलाई कांग्रेसले जोगाउँछ भनेर गएका हुन् भनेर कसैले मान्छ ? यहाँ ट्रेड युनियन, न युनियन कसैको मतलब छैन । उनीहरु आफैंसँग जोडिएको छ ।